नेपाल आज | प्रमज्यू, गफमै बिताइदिने पाँच वर्ष ?
प्रमज्यू, गफमै बिताइदिने पाँच वर्ष ?
बिहिबार, १२ बैशाख २०७६ गते प्रकाशित - नेपालआज समाचारदाता
सिंगापुरका लोकप्रिय राष्ट्रपति लिक्वान इयुले धेरै भाषण गरेरमात्र सिंगापुरको बिकास गरेका थिएनन् । व्यवहारमा खरो उत्रिन सकेमात्र विकास संभव छ । अरुको उदाहरण दिनसक्नेले त्यस्ता मानिसका काम गर्ने तरिका पनि अपनाउन सक्नुपर्छ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कसैलाई पनि छिटो जवाफ दिनमा माहिर हुनुहुन्छ । त्यस्तै सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा पनि बानी पनि मिल्दोजुल्दो छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका यस्ता रवैया हेरेर कतिपयले ठिक पार्नु भो विरोधिलाई भन्न सक्लान् तर समग्रमा देशका प्रमुख ब्यक्तित्वहरुले बोलेका र गरेका कामका हरेक गतिबिधि जनताले मुल्यान्कन गरिरहेका हुन्छन् ।
अहिलेको सरकारबाट जनताले राम्रो प्रणाली बसोस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, किसानले उत्पादन गरेका सामान समयमा बिक्रि होस भन्ने चाहन्छन् । तर जनताले सोचेका कुनै पनि काम सोचेअनुरुप भएको पाइदैन । भुपु प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीस , गृहमन्त्री तथा शक्तिसाली ब्यक्तिहरुले अझै पनि सरकारि गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् । सरकारले यति कार्य पनि रोक्न सकेको छैन । अनि कसरी सरकारले अरुलाई नियम र प्रणालीमा बाँध्न सक्छ ?
किसानका उखु खरिद गर्नको लागि व्यापारीको उक्साहटमा चिनीको भाउ बढाइयो , भारतीय चिनीलाई रोकियो तर किसानका उखु बारीमा नै सड्ने अबस्थामा पुगिसके । पंचायती व्यवस्थामा राम्रोसंग चलेका बीरगन्ज र भैरहवाका चिनी कारखानाले उखुको उचित मुल्यमा समयमा खरिद गर्दा पनि उक्त मिलहरु फाइदामै थिए । उक्त मिलहरु अहिले किन राम्रोसंग चलाउन सकिदैन ? निजी चिनी मिल जसको उक्साहटमा चिनीको भाउ बढाइयो उनीहरुले धोका दिए भनेर प्रधानमन्त्रीले स्वयं भन्दै हुनुहून्छ भने उनीहरुलाई किन कारबाही गरिदैन ?
शुसासन र समृद्धिको कुरा गर्ने सरकारले अब आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर बजेटको ठुलो रकम रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीका साँठगाँठमा बिल भर्पाइ मिलाएर बजेट सिद्याउने कार्य हुन्छ । यसलाई रोक्ने प्रयास समयमा गरियोस् । अब सडकहरु धमाधम पिच हुन थाल्नेछन् अनि बर्षापछि सबै पिच उक्कीन्छ तर कुनै पनि इन्जिनियर, ठेकेदार र सम्बन्धित हाकिमलाई कारबाहि हुदैन किनकि यहाँ सबैले कमिसन पाउने गर्दछन् । अनि कसरी बेरुजु घट्छ अनि कसरि गुणस्तरिय काम हुन्छ ?
जनताका अत्यन्त आधारभुत बस्तु खानेपानीको अभाव छ । मेलेम्चीको ठेकेदार भगाउनेलाई कारबाहि गरिएन तर उनै खानेपानी मन्त्री हिमालको पानी बेच्ने हावादारी कुरा बोल्दैछन् । किन ठुला कुरा गरेर जनतालाई चिढाउने ? कामगर्न नसक्नेलाई हटाउन पनि नसक्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?
जनताको लागि अत्यावश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपचारमा सर्वसाधरण जनताले गुणस्तरीय र पर्याप्त सुबिधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा अझै पनि आवश्यक पर्ने बिशेषज्ञ डाक्टर तथा इक्वीपमेन्टको अभावले जनता अकालमा मर्न बाध्य छन् । स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने फोहोरको डंगुर सबै शहरहरुमा छ । फोहोरको स्थायी व्यवस्थापनमा सबै महानगर तथा नगरपालिकाहरुमा रिसाइक्लीङको व्यवस्पन गर्न आवश्यक निर्देशन र बजेटको व्यवस्था गरियोस् । जसबाट शहरहरु सफा हुने र स्थानीय जनताका स्वास्थ्यमा सकरात्मक प्रभाव पर्दै जानेछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भ्रष्टहरुलाई निर्ममतापूर्बक कारबाही गर्ने र भएका नियमलाई अझै कडा बनाउन आवश्यक छ । यो सरकारको कार्यकालमा विद्युत उत्पादन पर्याप्त भइरहेकाले जनतालाई खाना पकाउनमा पनि विद्युत उपयोग गर्न महशुल केही सस्तो गर्न सके यसले ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । यसबाट बजेट घाटा न्युन हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका तिखो बोलीले केहि आसेपासेलाई रमाइलो लाग्ला तर अब मिठो बोलीले बिरोधी समुहको पनि मन जित्ने प्रयास होस ।
जनता र राष्ट्रको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र शुसासन कायम राख्न व्यवहारमा खरो उत्रिन सकेमात्र राष्ट्रको भलो हुनेछ । त्यसैले सबै जनताको चाहना प्रधानमन्त्रीको मिठो बोली खरो व्यवहार देख्न चाहन्छन् । अन्यथा संचार माध्यममा छाउनेभन्दा अरु केही हुनेवाला छैन ।